IBolt - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLuxury Coastal
ULuxury Coastal yi-Superhost
Ngubani owayenokucinga ukuba ishedi ethobekileyo, engasasetyenziswayo inokuphinda icingelwe ibe yindawo epholileyo ngolo hlobo?
Indawo yokufihla egqibeleleyo ezimbini, iBolt inokufumaneka kwingoma ebethiweyo kwindawo yasendle kunye ne-rustic yasemaphandleni; ubukhulu becala akafunyaniswanga kodwa kwimizuzu emine kuphela-ukuqhuba ukusuka kwidolophu yase Wells. Idizayinwe malunga neempawu zayo zantlandlolo kukho imvakalelo ecacileyo yasedolophini kwindawo, enomgangatho oqhekekileyo wekhonkrithi ogudisiweyo kunye nemiqadi yentsimbi ethelekisa isitayile sangaphakathi esithambileyo se-retro.
Isitovu samaplanga esibaswayo, ukufudumeza phantsi komhlaba kunye nefenitshala ye-chic yongeza kubunewunewu bendawo yokuhlala yesicwangciso esivulekileyo, ngelixa ikhitshi langoku ligcwele umpheki, ifriji, kunye nomatshini wokuhlamba izitya kuthetha ukuba iindwendwe ziyonwabela ixesha lazo zodwa zikhululeke ngokupheleleyo. Ucango olukhulu olusongwayo lwenza uninzi lweendawo ezintle kunye nemibono yasemaphandleni, ukukhukula kwekhaya ngokukhanya kwendalo kunye nokumema umoya welizwe ococekileyo ngaphakathi, kunye nombala obumnyama ngamabomu ohombisa iindonga udala imo yothando, i-sultry yonke.
Ukukhanya okubekwe ngononophelo kuzisa umoya okhethekileyo kuyo yonke indawo engaphakathi kwesithuba, kunye negumbi lokulala elihle elihle elinebhedi enkulu kunye ne-bespoke cowry shell chandelier; Ifashoni iyindawo yokuphumla elungele ngokugqibeleleyo iintsasa ezinobuvila kunye nesidlo sakusasa ebhedini.
Ngaphandle kukho okuninzi okunikezwayo kunye nepatio yesileyiti ebanzi ibe yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela ukukhanya kwelanga. Thatha ijusi kwaye uphumle kwindawo yokuphumla elangeni ngencwadi elungileyo, okanye uchithe iiyure untywila kwibhafu yakho yabucala eshushu ngaphandle kokukhathalelwa emhlabeni.
## IBolt isecaleni komnyango we-The Beam ngoko ke inokubhukisha kunye ukulungiselela itheko labane ##
Vula isicwangciso kunye nekhitshi kunye nendawo yokutyela kunye nokufikelela kwi-terrace thorugh iingcango eziphindwe kabini
Ukwahlula indawo yokuhlala enesofa ezibini, isitshisi seenkuni, itafile yekofu, udonga oluxhonywe iSmart TV kwisibiyeli esijikelezayo ukuvumela ukubukela ngaphakathi nangaphandle, izitulo ezithathu kunye netafile yekofu, isithethi seBluetooth.
Vula iplani enendawo yokutyela kunye neyokuhlala
Iiyunithi zeglosi zanamhlanje ezineoveni yombane eyakhelweyo kunye nemicrowave kunye nesitovu segesi, isikhenkcezisi esipheleleyo sefriji, umatshini wokuhlamba izitya, upholisa iwayini, iketile, itoaster kunye nomatshini wekofu weNespresso.
Ibar yesidlo sakusasa izihlalo ezimbini
Vula isicwangciso kunye nekhitshi kunye nendawo yokuhlala kunye nokufikelela kwi-terrace
Itafile enezitulo ezine
Ikwahlulwe kwiindawo zokuhlala ezinodonga lwekota ezintathu, ibhedi elingana ukumkani, iitafile ezisecaleni kwebhedi ezinezibane kunye nodonga oluxhonywe kwiFlatscreen TV.
Indawo yokuxhoma, itafile yokunxiba kunye nesitulo.
Igumbi lokuhlambela le-En Suite
I-en suite kwigumbi lokulala elikhulu
Hamba kwishawari, isitya sokuhlambela, iWC kunye nethawula yethawula eshushu
I-shampoo, i-conditioner kunye nokuhlamba umzimba kulungiselelwe iindwendwe
Terrace ngamaplanga avuthelweyo / ibhafu yombane eshushu
I-TV kwi-swivel ukuvumela ukujonga kwi-tub eshushu
Itafile enezitulo kunye neendawo zokuhlala elangeni
Ukupaka imoto enye kufutshane nepropathi
Umbuki zindwendwe ngu- Luxury Coastal
Izimvo eziyi-1 713
Ngoqhagamshelwano lwasekhaya okanye ngqo ngeLuxury Coastal 03301137005 okanye hello@luxurycoastal.co.uk